သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည့် ကုန်စည်လိုင်း (၁,၁၃၁) ခုနှင့် လိုင်စင်မလိုသည့် ကုန်စည်လိုင်းများ | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည့် ကုန်စည်လိုင်း (၁,၁၃၁) ခုနှင့် လိုင်စင်မလိုသည့် ကုန်စည်လိုင်းများ
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ HS. Code6Digit ဖြင့် ကုန်စည် (၅၃၆) လိုင်း သို့မဟုတ် HS. Code 10 Digit ဖြင့် ကုန်စည် (၁,၁၃၁) လိုင်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် လိုသည့် ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၎င်းစာရင်းတွင် တဆေး၊ အထွေထွေစားသောက်ကုန်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ၊ ဆိုးဆေး၊ ဆပ်ပြာကုန်ကြမ်း၊ အရောင်တင်ဆီ၊ အထွေထွေသုံး ဓာတုဗေဒပစ္စည်း၊ သားရေကုန်ကြမ်း၊ ဂုန်လျှော်ကြိုး၊ နိုင်လွန်ချည်၊ ကြိုးအမျိုးမျိုး၊ စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ လျှပ်စစ်မော်တာ၊ ဂျင်န‌ရေတာ၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းနှင့် အပိုပစ္စည်းများ အစရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။
သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ထပ်တိုးသတ်မှတ်သည့် ကုန်စည်များ စာရင်းကို အောက်တွင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်းများနှင့် ထပ်တိုးကုန်စည်လိုင်းစာရင်း အသေးစိတ်ကို အောက်ပါလင့်ခ်တွင် အသေးစိတ် လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၂)
အဆိုပါ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် ထုတ်ပြန်ထားသော မည်သည့်ကုန်စည်ကိုမဆို ပြည်ပမှ ပင်လယ်ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများမှ တင်သွင်းရာတွင် ယခုနှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားပြီးမှသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုတော့မည် ဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် HS Code 10 Digit အရ ကုန်စည် (၃,၀၇၀)၊ (၈၂၆) နှင့် (၁၄၁) လိုင်းများကို ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁)၊ (၁/၂၀၂၂) နှင့် (၂/၂၀၂၂) တို့ဖြင့် အသီးသီး ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်သည်။